သတ္တုများပုံသွန်းလုပ်ငန်းစဉ်: Shell မှိုတိကျစွာသတ္တုများပုံသွန်း
စက်လည်ပတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် - CNC စက်စင်တာ
ပစ္စည်း: Cr, Mo, V ကို, W, Cu
1. Cast လုပ်ငန်းစဉ်: ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသတ္တုများပုံသွန်း
2. သံမဏိအဆင့်: သင်၏လိုအပ်ချက်အတိုင်း
XTJ သည်သွန်းလောင်းရာတွင်အဓိက ဦး ဆောင်သူဖြစ်ပြီး OEM နှင့် aftermarket crusher အော်ပရေတာများအတွက် ၀ တ်ဆင်နိုင်သောထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်သည်။ စွမ်းအင်စက်ရုံများ၊ သံမဏိ၊ ဘိလပ်မြေနှင့်စက္ကူစက်ရုံများမှဖောက်သည်များအားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းအတွက် ၁၂ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသည်။
ဆန်ခါနှင့်ချည်နှောင်နယ်လှည့် & ဆန်ခါမီးဖိုပေါ်တွင်ပန်းကန်ဝတ်ဆင်
1. Casting လုပ်ငန်းစဉ်: Shell မှိုတိကျစွာသတ္တုများပုံသွန်း။
2. သံမဏိတန်း: 1,4777 1,4848 1,4837 ။
သွန်း၏ 3. ရှုထောင်သည်းခံစိတ်: DIN EN ကိုက ISO 8062-3 တန်း DCTG8 ။
သွန်း၏ 4. ဂျီ etr မေတြီသည်းခံစိတ်: DIN EN ကို ISO 8062 - တန်း GCTG5။
၅။ လျှောက်လွှာ - အပိုင်းအစများကိုဆန်ခါမီးဖိုပေါ်တွင် ၀ တ်ဆင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် pallet cars နှင့် sinter cars ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကြီးမားသောသံမဏိစက်ရုံများကို ဦး ဆောင်နေသည်။ ၁၀ နှစ်ကျော်သတ္တုများထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်သောဤခံနိုင်ရည်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းများသည်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းမွန်မှုနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောသွပ်မျက်နှာပြင်များအမြဲရှိသည်။